Filohan’ny HCC : “Zava-dehibe sy manana ny hasiny ny fianianana” | NewsMada
Filohan’ny HCC : “Zava-dehibe sy manana ny hasiny ny fianianana”
Tafapetraka amin’ny toerany maha filoham-pirenena azy ny filoha Rajoelina, ny asabotsy teo tetsy Mahamasina. Nisy ny hafatrafatra nataon’ny Filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Eric, ho an’ny filoha vaovao sy ny vahoaka malagasy.
“Zava-dehibe sy manana ny hasiny tokoa ny fianianana, tsy fombafomba fotsiny fa fanekena ampahibemaso ny hanaja azy antsakany sy andavany“, hoy ny filohan’ny HCC tamin’ny lahateny fohy, tsotra sy mivantana, tamin’ny lanonam-pitsarana nanetriketrika nandraisana ny fianianan’ny filoha vaovao ny Repoblika, Rajoelina Andry Nirina. Nambarany fa misokatra tokoa ny pejy vaovao ho an’ny firenena. Antenaina fa amin’ny dimy taona ho avy, ho mafy kokoa ny firaisam-pirenena, hisy kokoa ny fiarovana ny zon’olombelona, ho voahaja kokoa ny lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, araka ny nambarany.
Hikatsaka ny soa ho an’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny filohan’ny Repoblika. Fa tsy izy irery fa ireo rehetra hitana andraikitra eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Mila tomponandraikitra tena tia tanindrazana fa tsy am-bava fotsiny, mahay mihaino ny hetahetan’ny vahoaka, manana fanetren-tena, manana fitondran-tena mendrika eo anivon’ny fiarahamonina, mikendry ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Koa aoka isika rehetra tsy handiso fanantenana ny vahoaka malagasy.
Manana ny hasiny ny fianianana
Fitsarana manetriketrika izay lanonam-panjakana manana ny lanjany sy ny hasiny manokana. Iny fotoam-pitsarana iny no nandraisan’ny HCC ny fianianan’ny filoha vaovao ny Repoblika, Rajoelina Andry Nirina, indrindra indrindra: ny fianianana nataony no tena velirano ren-tany ren-danitra tamin’ny vahoaka malagasy.
“Zava-dehibe sy manana ny hasiny tokoa ny fianianana, tsy fombafomba fotsiny fa fanekena ampahibemaso ny hanaja azy antsakany sy andavany”, hoy ny filohan’ny HCC. Nasongadiny ny ampahany amin’ny fianianana hoe: ny fiarovana sy ny fanamafisana ny firaisam-pirenena. Naveriny indray fa taona hamerenana ny hasin’ny fiandrianan’ny fanjakana sy ny firenana malagasy izao. Ny filohan’ny Repoblika no tokony ho lohalaharana amin’izany, miaraka amin’ny Malagasy avy amin’ny foko rehetra. Ny fiaraha-mientan’ny rehetra no ahazoana manatratra izany tanjona manan-kasina izany.